Prezidaantiin Yunaayitid Isteets, Donaald Traamp, mootummaan Siiriyaa kan Prezidaant Bashaar Alasaadiin hoogganamu meeshaalee keemikaalatti akka hin fayyadamne taasisuutti ka fuuleffate, yunyitid Isteets fi wal-taatotnni ishee Farasaay Briteen, haleellaa gamtoome ka mootummicha irratti geggeessan tahuu Jimaata halkan labsanii jiran.
Akkuma prezidaant Traamp dubbatanitti, dho’insawwan magaalaa Siiriyaa –Damaaskus irraa ifa futtaasuu jalqaban. Haleellichi amma dhaabatee jira. Maddi oduu Asoosheeted Prees, magalattii gama bahaa irraa aaarri guddaan ka’ee isaa fi ibiddi boba’u guddaan gama bahaa irraa mul’achuu isaa gabaase. Televiiziyoonni Siiriyaa immoo aleellaaleen sun Waaltaa Qorannaa Saayinsii ka magaalaa Demaaskes cina jiruu fi kusaa waraanaa achitti dhihoo jirutti fuuleffatee geggeessamuu isaa gabaasee jira.
Humni ittisa qilleensaa Siiriyaa magaalaa Demaaskus irraa gama Kibbaatti raketoota gara sanatti dhukaasaman keessaa 13 dha’anii jiran jechuun gabaase –Sabaa-himaan Siiriyaa.
Kanumaan wal-qabatee, itti-aanaa prezidaantiin Yunaayitid Isteets, Maayik Pens, kora hoogganoota biyyoota Laatiin Ameerikaa, ka magaalaa galma-mootummaa Peeruu, Limaa geggeessame irratti, kaleessa waa’ee haleellaa waraanaa prezidaant labsanii ibsa kennuun, qooda biyya isaanii waltajjii addunyaa irratti qabdu irratti dubbatanii jiran.
Prezidaantichi Yunaayitid Isteets, Donaald Traamp, haleellaalee misaahelaa waaltaalee akka maadhee meeshaalee keemikaalaatti shakkaman irratti geggeessaman dinqsiifachuun “ergamni raw’atame” jedhanii, fuula Twiiterii isaanii irratti maxxansanii booda, itti-aanaa prezidaant Peens immoo barbaachisummaa tarkaanfii sanaa tumsuun dubbbatan. Akka michoonni Yunaayitid Isteets haleellaa gamtaa Yunaayitid Isteets, Faransaayii fi Briteeniin geggeessamanitti makaman hawachuutti ka fuuleffate – haasaan Pens.